Ọbara Snow ma ọ bụ snow na -acha ọbara ọbara: anyị na -agwa gị ihe kpatara ya | Meteorology netwọkụ
Emilio Garcia | 19/08/2021 09:30 | Emelitere ka 19/08/2021 09:31 | Mgbanwe ihu igwe, Meteorology
Ị hụtụla ka snow na -awụfu ọbara na soshal midia ma ọ bụ na ihe onyonyo telivishọn ọ bụla? Ụjọ atụla gị Ị hụrụ na ọ nwere mmasị ịmata? Ihe a na -akpọ 'Snow Snow' na anyị ga -agwa gị ihe kpatara na ka esi akpọ teknụzụ a dị ịtụnanya.
A na -anakọta ihe niile anyị ga -agwa gị n'isiokwu a n'ọmụmụ ihe dị iche iche na blọgụ na -akọwa ihe ahụ. Mana anyị na -atụ anya na karịa ihe okike, ọ nwere ike bụrụ ihe kpasuru iwe. Ma ị nwere ike na -eche, gịnị kpatara ya? Ọ dị mma, n'ụkpụrụ, dịka ọmụmụ si dị, ọ dị ka nke ahụ ọ bụ n'ihi mgbanwe ihu igwe. Otu ihe na -egosi ihe na -eme na mbara ụwa anyị.
1 Snow Snow Gịnị ka ọ bụ n'ezie?
2 Mpụta izizi ama ama nke Ọbara Snow
3 Ihe ịtụnanya ndị ọzọ: Anya mmiri na -acha anụnụ anụnụ
Snow Snow Gịnị ka ọ bụ n'ezie?
Iji zaa nke a, dịka anyị gwarala gị na mbụ, anyị ga -eme nyocha n'ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche na ọmụmụ mba ofesi. Mana anyị achọtala azịza ma anyị nwere ike ịgwa gị ihe Snow Snow bụ.
Teknụzụ anyị nwere ike ịkpọ ihe ịtụnanya a dịka Chlamydomonas nivalis, ọ dabere na ụdị dị iche iche nke algae akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke nwere ụcha dị iche iche dị n'ime ha, gụnyere ọbara ọbara, na -enweta usoro photosynthesis wee mebie snow. Ya mere, ọ bụ ya, ọ bụghị ọbara n'etiti snow, ọ bụghị n'ihi na anụmanụ ma ọ bụ mmadụ ọ bụla gbara ọbara na ya ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Nanị, n'ikwu okwu, ọ bụ algae.
Ọ bụ eziokwu na onweghị onye tara ahụhụ na snow, na anyị ekwesịghị ịtụ ya ụjọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ee ọ bụ ihe na -egosi na ihe ọjọọ na -eme na mbara ụwa anyị na ọdịdị ya na anyị ga -atụkwa ụjọ site n'ụdị ihe ndị ọzọ anyị na -ebute.
Foto ndị a niile anyị na -ahụ snow na -acha ọbara ọbara sitere na mpaghara dịka Alps, Greenland ma ọ bụ Antarctica n'onwe ya. Kedu ihe na -eme na mpaghara ndị a ka ihe atụ a mee? na anyị na -eme ka mbara ala dị ọkụ karịa ihe anyị kwesịrị. Mpaghara ndị a na -ekpo oke ọkụ karịa ka o kwesịrị ịdị na ọghọm gị. Nke a na -eme ka ihe gbazere na otu ihe ahụ ka ọ gbazee bụ ihe yiri ka ọ na -eme ka ọnọdụ zuru oke pụta maka ụdị algae agba agba na -ama nke ọma.
Mpụta izizi ama ama nke Ọbara Snow
na Ihe mbụ nke ihe a mere malitere na Aristotle, ee, dịka ị gụrụ ya, n'akwụkwọ ya. Ọdịiche a na -aga n'ihu kemgbe narị afọ ma ọ bụ puku afọ nke n'ime ha niile, o debere ndị na -arị ugwu dị iche iche, ndị na -arị ugwu, ndị na -ahụ maka ihe okike na ndị ọzọ na -agafe ebe oyi dị otú ahụ nke nta nke nta na -ekpo ọkụ.
N'ime ọtụtụ afọ kemgbe narị afọ nke atọ BC, ọ natala aha dị iche iche, dịka snow anyụ. Hụ ma ihe 'okike' a nwere oge nke ya onwe ya nwere Times edeworị banyere ya na Disemba 4, 1818.
Nchọpụta e mere n'oge na -adịbeghị anya bụ n'ihi onye isi ụgbọ mmiri nke chọpụtara ihe na -acha ọbara ọbara nke ice nke si n'ụzọ ya pụta. Emere ice a maka ọmụmụ na nyocha dị iche iche n'ihi na ha enyeghị otuto ọ dịghịkwa onye kwere na oge ụfọdụ snow na -acha ọbara ọbara ma ọ bụ snow snow dara.
Ihe achọpụtara n'ọmụmụ ihe ndị a dị iche iche emere n'oge ahụ bụ na n'ọnwa oyi Chlamydomonas nivalis, nke a na -akpọkarị Snow Snow, ọ na -apụ kpamkpam. Ọ bụ n'oge opupu ihe ubi ka mmụba nke ọkụ na ọkụ n'onwe ya na -amalite mgbe ọ na -amalite ito ekele maka nri ndị ọ hụrụ na gburugburu, nke na -akpali algae ka ọ nwee ike gbasaa ya na mgbaze.
N'ikpeazụ, ihe na -ebute onyonyo a bụ nke ahụ na -agbaze na -agba ọsọ na mpaghara ahụ na -eji nwayọọ nwayọọ na -efunahụ ọdịdị ala ya, ihe na mpaghara oyi na oke mmiri jụrụ oyi anaghị adabara anyị ma ọlị.
Gịnị mere o ji agbaze na mbụ? n'ihi na agba uhie nke algae nwere ụcha na -egosipụta obere ọkụ sitere na anyanwụ ya mere a na -eme ka ihe na -eme ngwa ngwa mee ngwa ngwa, ọ dị mwute maka ụwa. Na ngwụcha, ọ bụghị ihe ọ bụla karịa ịcha ọcha na -ata ọdụ ya yana na nke ọ bụla, na -emerụ ụwa anyị ebe anyị achọghị ka mmiri ahụ gbazee na -abawanye na ya na oke osimiri.
Ihe ịtụnanya ndị ọzọ: Anya mmiri na -acha anụnụ anụnụ
Ụwa anyị juputara n'ụdị ihe a, n'ọtụtụ ọnọdụ (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile) kpatara ịdị adị mmadụ na mgbanwe ihu igwe ngwa ngwa na anyị na-ebutekwa onwe anyị kwa ụbọchị na-eleghara gburugburu na ọdịmma ya anya.
Dịka ọmụmaatụ, ihe a na-akpọ Blue Tears na-apụta n'oké osimiri Taiwan. Anya mmiri a na -acha anụnụ anụnụ, dị ka akụkọ dị iche iche anakọtara na mpaghara agwaetiti Matsu, ihe ha na -ebute bụ nnukwu ọkụ na -acha anụnụ anụnụ n'oge ọkọchị. Ọzọkwa, ọ bụ n'ihi ọdịdị osisi dị iche iche, ya bụ, ihe dị ndụ dị iche iche nke dị na nke a bụ bioluminescent na nke a na -akpọ dinoflagellates. Ihe a niile na -adọta ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị njem, onye anyị na -ekwe nkwa na ị maghị na ọkụ na -acha anụnụ anụnụ bụ ihe ọ bụla ma ọ dị mma, ebe ọ bụ na -egbu egbu nke ukwuu na kwa afọ ọ na -abawanye na mpaghara Taiwan ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ọbara Snow ma ọ bụ snow na -acha ọbara ọbara: anyị na -agwa gị ihe kpatara ya